गगन थापाकाे प्रश्न : सरकारले के आधारमा पूर्वराष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्यो, प्रमज्यू ?
काठमाडौं– पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको विदेशमा हुने उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
पेटमा क्यान्सर देखिएपछि पूर्वराष्ट्रपति यादवको तीन वर्षअघि अमेरिकामा उपचार गरिएको थियो । अमेरिकाबाट स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किएपछि डा. यादव भारतको चण्डीगढस्थित पिजिआइएमइआर अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका छन् ।
दुईसाता अघि रगतमा केही खराबी देखिएपछि डा. यादव उपचारका लागि भारतको चण्डीगढ गएका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वराष्ट्रपति यादवले भारतमा गराएको उपचार खर्च बिलअनुसार बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयमाथि आपत्ति जनाउँदै थापाले पूर्वराष्ट्रपतिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘हामीले १ वर्ष अगाडि पारित गरेको कानुनले प्रस्ट भन्छ– कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले दिँदैन । पूर्वराष्ट्रपति वा वर्तमान प्रम जो भए पनि यो कानुन सबैलाई लाग्छ, सरकारले के आधारमा विदेशमा गरेको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्यो, प्रमज्यू ?’
प्रकाशित मिति : असोज १२, २०७६ आइतबार १२:३०:२,